China Eco-solvent Glitter Silver Printable PU Flex ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |အလီဇာရင်
Ink Jet Transfer Paper (စားပွဲဖြတ်)
ကြီးမားသောဖော်မတ် Ink Jet Transfer Paper (ဇယားဖြတ်)
Eco-Solvent inkjet မီဒီယာ
တရားဝင် ဖြန့်ဝေသည့် ပရင်တာများ
ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် : HTS-300SGL
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Eco-Solvent Glitter Silver ကြယ်ပွင့်တောက်ပြောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ ပုံနှိပ်နိုင်သော PU Flex
50cm X 30M/လိပ်။
မင်နှင့် လိုက်ဖက်နိုင်မှု- Solvent ink၊ Eco-Solvent Max မှင်၊ Mild Solvent မင်၊ BS4 မှင်၊ Latex မင် စသည်တို့။
အွန်လိုင်းမှမေးမြန်းပါ။ PDF ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Eco-Solvent Glitter Silver Printable PU Flex ကို Eco-Solvent inkjet ပရင်တာ အမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပြီး ရုပ်ပုံထိန်းသိမ်းသည့်အရောင်၊ ဆေးကြောပြီးနောက် လျှော်ဖွပ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သော ကြာရှည်ခံမှုကို ရရှိစေပါသည်။မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဓာတ်ပုံများဖြင့် အထည်များကို အလှဆင်ပါ။ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ပူပြင်းသောအရည်ပျော်ကော်သည် ချည်ထည်၊ polyester/cotton နှင့် polyester/acrylic၊ Nylon/Spandex စသည်တို့ကို အပူဖိစက်ဖြင့် ချည်မျှင်ကဲ့သို့သော အထည်အလိပ်များပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းရန် သင့်လျော်ပါသည်။အမှောင် သို့မဟုတ် ရောင်စုံတီရှပ်များ၊ ကင်းဗတ်အိတ်များ၊ အားကစားနှင့် အပန်းဖြေဝတ်စုံများ၊ ယူနီဖောင်းများ၊ စက်ဘီးစီးဝတ်စုံများ၊ ပရိုမိုးရှင်းဆောင်းပါးများနှင့် အခြားအရာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် စံပြဖြစ်ပါသည်။ပုံနှိပ်နိုင်သော PU Flex ၏တောက်ပသောသတ္တုနောက်ကျောဖြင့်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပြီးနောက်၊ တောက်ပသောသတ္တုအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့် အရောင်ပြောင်းပါမည်။
■ စိတ်ကြိုက်ဓာတ်ပုံများနှင့် အရောင်ဂရပ်ဖစ်များဖြင့် အထည်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
■ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အရောင်ဖျော့သော ချည်ထည် သို့မဟုတ် ချည်/ပိုလီစတာ ရောစပ်ထားသော အထည်များအတွက် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရလဒ်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
■ တီရှပ်များ၊ ကင်းဗတ်အိတ်များ၊ ပတ္တူအိတ်များ၊ ယူနီဖောင်းများ၊ ဂွမ်းပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံများ စသည်တို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
■ ကောင်းမွန်စွာ ဆေးကြော၍ အရောင်အသွေး ထိန်းသိမ်းပါ။
■ ပိုပျော့ပြောင်းပြီး ပျော့ပြောင်းသည်။
Roland Versa CAMM VS300i/540i၊ VersaStudio BN20၊ Mimaki JV3-75SP၊ Uniform SP-750C နှင့် အခြားသော Eco-solvent inkjet ပရင်တာများ ကဲ့သို့သော Eco-Solvent inkjet ပရင်တာ အမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
4. ပုံနှိပ်ခြင်း ဆက်တင်
၁)။အလယ်အလတ်ဖိအားကို အသုံးပြု၍ 165°C တွင် အပူဖိခလုတ်ကို 25 စက္ကန့်ကြာအောင် သတ်မှတ်ပါ။
၂)။လုံးဝချောမွေ့ကြောင်းသေချာစေရန်5စက္ကန့်အတိုချုံးအပူပေးပါ။
၃)။ပုံနှိပ်ထားသောပုံကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်.၅ မိနစ်ခန့် ခြောက်အောင်ထား၍ အနားတဝိုက်ရှိ ပုံအား ဖြတ်ထုတ်ပါ။ကျောကပ်စက္ကူမှ ရုပ်ပုံမျဉ်းကြောင်းကို ကော် polyester ဖလင် (TF-100) ဖြင့် ညင်သာစွာ ဖယ်ထုတ်ပါ။
၄)။ပုံမျဉ်းကို ပစ်မှတ်ထည်ပေါ်တွင် အပေါ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူပါ။
၆)။25 စက္ကန့်ကြာအောင် လွှဲပြောင်းပြီးနောက် ချည်ထည်ကို ဖယ်ခွာကာ မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် အအေးခံကာ ကော်ပိုလီယာကို ထောင့်စွန်းမှ စတင်၍ အခွံခွာပါ။
7. ဆေးကြောရန် ညွှန်ကြားချက်များ
အတွင်းအပြင်ကို ရေအေးဖြင့် ဆေးပါ။BLEACH မသုံးပါနှင့်။အခြောက်ခံစက်ထဲထည့်ထား ဒါမှမဟုတ် ချက်ချင်းခြောက်အောင်ထားပါ။ပုံပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် တီရှပ်ကို အက်ကွဲအက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် မဆန့်ပါနှင့်၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် တွန့်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အပူဖိခြင်း သို့မဟုတ် သံဓာတ်ကို စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် သေချာစေရန် ဆီဆီစာရွက်တစ်ရွက်ကို လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုလုံးအပေါ်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖိထားပြန်သည်။
ပုံ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်သံမထည့်ရန် သတိပြုပါ။
ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း- 35-65% နှိုင်းရစိုထိုင်းဆအခြေအနေများနှင့် အပူချိန် 10-30°C တွင်။
အဖွင့်အထုပ်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း- မီဒီယာ၏ အဖွင့်အထုပ်များကို အသုံးမပြုသည့်အခါ ညစ်ညမ်းမှုမှကာကွယ်ရန် အလိပ် သို့မဟုတ် စာရွက်များကို ပလပ်စတစ်အိတ်ဖြင့်ဖုံးကာ ပရင်တာမှ လိပ် သို့မဟုတ် စာရွက်များကို ဖယ်ရှားပါ၊ ၎င်းကို အဆုံးတွင် သိမ်းဆည်းပါက အဆုံးပလပ်ကို အသုံးပြုပါ။ နှင့် လိပ်၏အစွန်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန် အစွန်းကို တိပ်ချ၍ အကာအကွယ်မရှိသော လိပ်များပေါ်တွင် ချွန်ထက်သော သို့မဟုတ် လေးလံသော အရာများကို မတင်ပါနှင့်၊ ၎င်းတို့ကို မတွဲပါနှင့်။
ယခင်- Eco-solvent Brilliant Golden Printable PU Flex
နောက်တစ်ခု: Eco-Solvent InkJet Transparent ရုပ်ရှင်
Eco-Solvent ပုံနှိပ်နိုင်သော ဗီနိုင်း
မူပိုင်ခွင့် © 2022 Alizarin coating co.ltd |မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး